Ngwuputa Zirconia Disc-News-VSmile Co., ltd
Igwe Zirconia Diski
Oge: 2021-06-03 ikwu:13
Dị ka ahịa na-eduga eze zirconia manufactuers, anyị'ekwuru ọtụtụ narị onye nwe ụlọ nyocha ezé n'oge afọ gara aga, na mkparịta ụka ahụ buru ibu na-enye anyị ọtụtụ nghọta iji melite mmepụta anyị, na-enyekwa anyị ahụmịhe dị oke ọnụ ahịa maka etu esi arụ ọrụ ngwaahịa anyị nke zirconia, anyị'ọ masịrị m ịkọrọ gị ụmụ okorobịa.
E nwere ụkpụrụ anọ dị mkpa ka ị gbasoo mgbe ị na-arụ ọrụ Vsimle eze zirconia diski: ngwa ngwa ngwa ngwa, ọnụego nri dị elu, ịrị elu na oke mmiri.
Zirconia na-agbakọ ma na-agbaso ngwaọrụ na ngwa igwe. Ọ na-abụkarị na ọ na-arụ ọrụ siri ike, na-achọ ka akụkụ dị elu karịa nke na-egbutu ngwa ọrụ iji banye n'ime ọrụ siri ike ma belata mgbawa dị ọcha. 12 ruo 15 ogo ziri ezi radial zaa enye ezigbo elu imecha na ngwá ọrụ ndụ.
Cha udu ae si .005 ”rue .010” kwa eze na 150 rue 250 SFM. Ebe ọ bụ na a na-eji obere egbutusị ejiri obere ihe gafere ụkpụrụ, ejiri mepụta obere ibe ya n'ihi ya, a ga-eme mgbanwe ịmịcha Radial Mgbaji iji belata ọnụọgụ akụrụngwa, mmecha adịghị mma na obere akụkụ - ọzọ ihe kpatara ide mmiri iju mmiri dịka ọkụ na-eweta site na machining usoro a na-adịghị zigara mgbawa (ma n'ihi na-ekwesịghị ekwesị faili ntanetịime / gbapụrụ ọsọ ma ọ bụ eziokwu ahụ bụ na zirconia bụ a mara ezigbo mma insulator) ma kama na-anọgide na ọnwụ ngwá ọrụ nke nendsche gall na ngwá ọrụ ọnwụ na enyemaka na-ebupụta.
N'ihi nhụsianya ya, igwe na-arụsi ọrụ ike na ihe ndozi na-enye nsonaazụ kacha mma ma ọ dị mkpa ịnọgide na-enwe nkwụsịtụ na-enweghị nkwụsị, na-aga n'ihu mgbe niile, ịrị elu mgbe ị na-arụ ọrụ.
Igwe ọrụ "slurry" jikọtara ya na igwe akọrọ zirconia dị ezigbo mma, caustic na abrasive dị ukwuu. N'agbanyeghị ezigbo ihe nzacha na nnukwu usoro agụụ ọ na-esiri ike igbochi ájá ka ọ ghara ịbanye na mpaghara nke "igwe akara" nke igwe (bọlbụ, ụzọ, usoro njem, ogige elektrọnik, wdg). Nbanye a ga - eduga na mgbochi akaghi aka na igwe akụrụngwa dị oke egwu ma n'ọtụtụ ọnọdụ gbanahụ mpaghara igwe eji eme ihe ma gbakọta na gburugburu ọrụ.
E nwekwara mkpọtụ ma gbakwunye ụgwọ na mmezi metụtara na nzacha na agụụ usoro.
Ebe ọ bụ na zirconia na-agba ume, ọ gaghị ahapụ ka ọ kpọọ nkụ ma gbakọta na igwe igwe maka ogologo oge. N'oge ruo taa rinsing nke machining ogige nke igwe iji tube mmasị na coolant nozulu mgbe rụọ ọrụ coolant mgbapụta bụ nnọọ ngwa ngwa na ụzọ dị mfe iji mezuo nke a. Ọzọkwa, ogbugba ngwa ngwa na igwe na-ehicha ụgbọ ala dị ọnụ ala n'ime igwe "ime ụlọ" site n'oge ruo n'oge ga-eme ka ebe ahụ na-egbuke egbuke na nke ọhụrụ. Usoro a niile na-ewe ihe dịka nkeji 5 ma ọ bụ karịa.
Ezigbo mmiri dị mma iji. Anyị na-eji ya maka zirconia na iko-ceramik. Enwere ike ịnweta ndụ ọrụ site na iji mmanu. Ugbu a, anyị na-anwale mmiri na-agba mmiri, mmiri na-enweghị mmiri dị ka ezigbo nkwa. Dị ka e kwuru na mbụ ihe mmapụta mmanu na zirconia ma ọ bụ iko-ceramik niile dị njọ.
Igwe na-arụ ọrụ na-agbakwunye nzọụkwụ ọzọ na-anwụ anwụ na arụmọrụ ahụ dịka nkeji nwere mmiri fọdụrụ nwere ike ịgbawa na nsị ma mee ka agba dị iche iche pụta ìhè.
Igwe ọkụ toaster dị ọnụ ala na-arụ ọrụ nke ọma. Oge ịkpọ nkụ dịgasị iche. Hụ okpuru.
Single (70 Celsius C)): 15 nkeji +
Otu (140 Celsius C): 5-10 nkeji
Nkeji 2-4 (70 Celsius C): 40 nkeji +
Nkeji 2-4 (140 Celsius C): Nkeji 25 +
Nkeji 5 + (70 Celsius C): Nkeji 50 +
Nkeji 5 + (140 Celsius): 25 nkeji +
Ndị ahịa anyị achọtala nhicha igwe (nke a ga-eme agbanyeghị), ịgbanye coolant (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa) na ihicha bara uru maka ịzụ ahịa maka ndụ ngwa ọrụ, mmefu ego na-arụ ọrụ, obere mkpọtụ mkpọtụ, ebe ọrụ na-ehicha ọcha, ịgbatị ogologo ndụ igwe, elu ogo na ihe ndị ọzọ ịchọ mma.
PREV: Usoro Vsmile Advanced: Dental Zirconia
OSOTE : 3, 4, 5 AXIS Dental Milling Machine
Vsmile Milling Burs Wieland ® Mini Kwekọrọ